MuIjipita yekare, vasungwa vainzi "skr-cnh" zvinoreva kuti "nhapwa" - Afrikhepri Fondation
Svondo, Nyamavhuvhu 9, 2020
MuIjipita yekare, vasungwa vainzi "skr-cnh" zvinoreva kuti "nhapwa"
En Egypt yekare, vasungwa vainzi "skr-cnh" zvinoreva kuti "nhapwa". Zvakanga zvimwe chete mune ese, musungwa aive nhapwa aive nekodzero uye aifarira rusununguko rwakati, iye asiri muranda, chinhu, kana chinhu icho munhu aigona kurwisa marudzi ese. kushungurudzwa. Izwi rekuti muranda saka haritsvaki midzi yaro muAfrica, asi muEurope, uko kuremekedzwa kwevanhu kuri kure nekuve mukuwirirana nemweya wepfungwa hwevaAfrica.
Zvakare, sekureva kwechikepe cheItaly Ca Da Mosto, vakatora varanda, vakavabhabhatidza, vakavadzidzisa chiPutukezi, ndokuvapa mazita eEurope, ndokuzoenda navo kuAfrica kunotora nekutengesa vamwe varanda; wedzera pane ichi boka rakakura rematsotsi, mhondi, maPutukezi ma brigands uye mumwe akawana chirongwa chekupamba chakagara makore anopfuura mazana mana.
Ngatiisei isu kwenguva diki mumamiriro ezvazviri; iwe uri muAfrica pane nyika dzako dzakapakata uta, pfumo uye nhoo uye unouya kumba kwako varume vekuchena chena vakapfeka pfuti, mheni, vane chinangwa chimwe chete, kutora huwandu hwepamusoro dema (iyo dema yegoridhe yenguva yacho) nenzira dzose dzinogoneka. Isu tinoyeuka kuti hwaro hwekutengeserana kuchinjanisa kwezvinhu kana mashandiro. Kutengeserana kuri kupi pano? Ngativei zvakanaka uye takangwara mukuratidzira kwedu, machinda aya haana kusarudza kutengesa, asi akamanikidzwa kuti, kana zvisiri izvo nei vasina kuzviita isati yapinda nyika yavo nevachena.
Zvimwe zvinobuditswa kubva mubhuku raMnu Bwemba-Bong "Kana munhu wemuAfrica aive Goridhe yeBlack yeEurope, MENAIBUC editions".
King Alfonso I (NzingaMbemba) mambo weKongo: "Mazuva ese, vatengesi vanobira vanhu vedu, vana venyika ino, vanakomana vevakuru vedu uye makurukota, vanhu vemhuri yedu (…) kudzivirira kushungurudzwa uku, tine Vanoda muumambo uhu vapristi chete uye vanhu vashoma kudzidzisa muzvikoro (…) isu kuda kuti Humambo hausi nzvimbo yekutengesera kana yekufambisa yevaranda ”
Mambo Tezifon weAllada "uchavaka imba paunotanga kuisa zvimedu zviviri zvidiki zvehuni, gore rinotevera uchaisa mana, uye munguva pfupi fekitori yako ichaisa metamorphose munhare inoda kuve tenzi wematunhu angu uye kukuita iwe kuti ugone kugadza mitemo pamusoro pangu ”.
Almany, mambo weMoslems nevatungamiriri vese venyaya yake… tinokunyevera kuti vese vanozouya kwatiri kuzoita kutengeserana vachapondwa nekuurayiwa kana ukasadzosera vana vedu kwatiri… isu hatidi kuti utenge maMuslim kana kubva padhuze ”
Vanhu vemuAfrica vagara vachiramba kutengeserana kwevaranda. Kurwa kwavo nevashambadziri vevaranda kwakasvitsa kuparadzwa kwehumambo hwese hweAfrica, husina kugona kuramba vapomeri vakabata zvombo. Izvo zvakateerana kumisikidzwa kumisoro yeumambo, nenyika dzevaranda, emadzishe emamemba eAfrican kana vachena vane mazita eAfrican ayo anozotariswa munguva yedu sevaAfrica vachitengesa vamwe vavo nekugutsikana.
"Izvi zvinoratidzira kuona kuti mubvunzo wekutengeswa kwevanhu vekune imwe nyika uyo unobata vanhu vese unongoita dambudziko uye uine mhosva kune maAfrica enguva yevaranda." Uku kuvanda chimwe chinhu. MaEuropean vakatora zvakanyanya vakatengesa vamwe vavo kumaArabu kwemazana emakore kuti vabatsirwe nekutengeswa kwevaranda panguva iyoyo. MaFrench akatengesa zvakanyanya kumaGerman munguva yeHondo yechipiri yenyika. Ivo vakatotengesa maJuda nezviuru nekukonana kwevakuru veHurumende ... mune yeFrance nyaya, isu tinoisa mberi nhengo inorwisa Jean Moulin uye muAfrica zviitiko, tinova amnesiac. Vamwe maIndia vakashanda se scout mumauto eAmerican munguva yavakakundwa kumadokero, maChinese akanamatira kuhurumende panguva yehutongi vaive pro-Anglo-Saxon, asi maAfrica chete ndivo vari kumiswa pamberi nekutaura kuti vakatengesa hama dzavo. Pfungwa chaiyo yehama dzakangotora chirevo chadzo mushure mekugadzwa kwemauto kwakapwanya vanhu vese vemuAfrica mune imwe furu. Pakutanga, vaive vanhu vakabatana kana kwete nemubatanidzwa, vanozvipira kana kuti kwete. Vanyori venhoroondo dzekuMadokero vanowana nhoroondo yekutanga isati yenyongori nekuzivisa zvese zvakabhadharwa kuti madzimambo eAfrica, vachiita hondo dzemukati dzisina kurongeka, pakupedzisira akazviwana nemuranda wakakura wevaranda uyo waifanira kutengeswa pasina muripo. Hazvina kugona uye kusavimbika kwepfungwa ".
NaKamit Serge Bonza
Kana muAfrica aive goridhe dema reEurope
kubvira pana Nyamavhuvhu 8, 2020 3:43
Edition 3th edition
Mashiripiti eCosmos - Chinyorwa (2012)
zvakavanzika zveesoteric zveiyo geometry inoyera - Documentary (2010)
Francisco Del Rosario Sanchez aive ani, baba vekusununguka kweSanto Domingo?
Vanhu vemuAfrica vagara vachiramba kutengeserana kwevaranda. Kurwa kwavo nevatengesi vevaranda kwakasvitsa kuparadzwa kwehumambo hwese hweAfrica